‘स्योरसट’ हुनेबित्तिकै ओली सरकार ढाल्छौं : देउवा – Nepal Press
#अनिल कुमार साह
‘स्योरसट’ हुनेबित्तिकै ओली सरकार ढाल्छौं : देउवा
२०७८ वैशाख ६ गते १६:०६
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्भावना सुनिश्चित हुनासाथ सरकार ढालिने बताएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघको ५२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले आफू ओली सरकार ढाल्न प्रयासरत रहेको बताए । ‘यो सरकार ढाल्ने नै हो । तर अझै सम्भावना सुनिश्चित भएको छैन । स्योरसट हुनासाथ सरकार ढाल्छौं । स्योरसट त हुनुपर्‍यो नि’, देउवाले भने ।
उनले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपा कोतिर उभिन्छ भन्ने प्रष्ट नभएकोले आफूले ‘स्टेप’ नलिएको बताए । ‘अहिले माओवादीले समर्थन गरिरा’छ । मधेशवादी दलको पनि भर छैन । राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो । सरकार ढल्ने सम्भावना छ तर अझै स्योरसट भाछैन’, देउवाले भने ।
उनले नयाँ वर्षमा मुलुकले केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कोरोनाबाट उन्मुक्ति पाउनैपर्ने बताए । ‘ यो वर्ष ओली सरकारको कुतन्त्र र कोरोनाको कहरबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ’, देउवाको भनाइ थियो ।
उनले निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई निकै राष्ट्रवादी देखाएर भोट बटुलेपनि अहिले भारतको ‘टाङमुनि’ छिरेको टिप्पणी समेत गरे ।
‘हिजो चुनावको बेलामा ओलीले भारतको विरोध गर्थे । तर अहिले भारतकै टाङमुनि छिरेका छन् । नक्कली राष्ट्रवाद अब धेरैदिन टिक्दैन’, देउवाले भने । उनले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र सबैलाई मिलाएर लैजान आफू प्रयासरत रहेको समेत बताए ।
#नेपाल विद्यार्थी संघ
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ६ गते १६:०६
निर्वाचन अधिकृत वेपत्ता भएपछि काभ्रेमा पालिका अधिवेशन स्थगित
टिम छाड्न लागेका निधि र शर्मासंग देउवाको छुट्टाछुट्टै छलफल
एमाले छाड्ने प्रभु साहको संकेत, चाँडै क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरण हुने दावी
आफूसँग चुनाव लड्न चुनौती दिँदै बादललाई सुदनको जवाफ- फिस्टो मार्न गुलेली नै काफी
कांग्रेस अधिवेशनः धरानमा पोखरेल र राई, इटहरीमा केसी र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा
नेतृत्वप्रति गगनको प्रहार- विधि र थितिमा नबस्नेले कांग्रेसको बेहाल बनाए
देशभर १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोबारे अध्यक्षसँग जवाफ मागेको हुँ : झपट रावल (भिडिओ)
एमालेमा ३ उपाध्यक्ष: कसरी होला ६ जना हाइप्रोफाइल नेताको व्यवस्थापन ?
एमाले बैठकमा सुदूरपश्चिमका तीन नेताको प्रश्न, ओलीले दिए यस्तो जवाफ
१० जनामा सीमित बायर्न वियजी
जीवन राईलाई केन्द्रीय सदस्य दिएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत र कलम चिह्न लिने !
वाईसीएलको वडा भेलामा लिलामणि पौडेलको प्रशिक्षणः एमाले र माओवादी उस्तै होइनन् (भिडिओसहित)